SearchSpring oo ay heshay shirkadda Scaleworks ee ganacsiga | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/SearchSpring oo ay heshay shirkadda sinaanta ee Scaleworks
SearchSpring oo ay heshay shirkadda sinaanta ee Scaleworks
Scaleworks, oo ah shirkad maaliyadeed iyo shirkad sinaan ah oo fadhigeedu yahay San Antonio, ayaa heshay bixiyaha goob raadinta ee SearchSpring. Helitaanka ayaa ku siin doona SearchSpring kheyraad iyo maalgashi si loo cabbiro wax-soo-saarka gudaha ee raadinta iyada oo kor u qaadeysa awooddeeda ganacsi.
Waa maxay SearchSpring? Waxaa laga aasaasay Denver, CO 2007, SearchSpring waxay ku takhasustay bixinta raadinta, navigation iyo tignoolajiyada baayacmushtarka si toos ah macaamiisha macaamiisha ah iyo goobaha. Macaamiishooda waxaa ka mid ah noocyada sida Bethesda Game Studios, Volcom, Bikini.com iyo Moen. Alaabooyinka SearchSpring waxay la midoobaan meheradaha waaweyn ee e-commerce sida Shopify Plus, Magento, Miva iyo BigCommerce.
Wax badan oo ku saabsan iibsiga. Si madaxbanaan ugu shaqaynaysay sidii shirkad bootstrapped ilaa dhawaan, SearchSpring waa hawl-galkii ugu horreeyay ee Scaleworks ee ganacsiga e-commerce. Iyada oo qayb ka ah iibsashada, Peter Messana, hore COO ee GroupBy, ayaa bedeli doona aasaasaha SearchSpring Gareth Dismore sida CEO.
War saxaafadeed ay soo saartay SearchSpring ayaa sheegaysa in iibsigu uu gacan ka geysan doono qaadashada Platform-ka ku habboon ee shirkadda, kaas oo awood u siinaya ganacsatada in ay xakameeyaan oo ay si otomaatig ah uga dhigaan sida alaabtu uga muuqato goobtooda oo dhan, noocyo badan iyo tafaariiqlayaal.
Waa maxay sababta aan u daryeelno. SearchSpring waxay awooday inay ka faa'iidaysato kobaca D2C iyadoo bixisa raadinta gudaha iyo tignoolajiyada baayacmushtarka ee noocyada ganacsiga e-commerce, iyo shirkadaha ganacsi sida Scaleworks ayaa sidoo kale aqoonsanaya awooda.
Tani waxay hoosta ka xariiqaysaa sida ay muhiimka u tahay in la haysto matoor gudaha ah oo karti leh iyo xal ganacsi. Iyo, iyada oo iibka e-commerce la saadaaliyay inuu kori doono 15.1% (ilaa $ 605.3 bilyan) gudaha Mareykanka kaliya sanadkan, shirkadaha e-commerce waxay noqon doonaan kuwo caqli gal ah inay hubiyaan in nidaamyada ay ku shaqeeyaan ay u fududeeyaan shaqaalahooda oo ay ka caawiyaan macaamiisha inay helaan waxa ay ' dib u raadin
Sidee Google Gareeyaa Macluumaadka Shakhsiyadeeysi Xayeysiinta
Sida loogu daro music adiga kuu gaar ah si aad iPhone la'aanteed iTunes